Gufgaf|Online करीनाका २ वर्षे छोराको बलिवुड डेब्यु !
करीनाका २ वर्षे छोराको बलिवुड डेब्यु !
गफगाफ- बलिवुड अभिनेत्री करीना कपूर खानका छोरा तैमुर अलि खान आफ्नो क्युटनेसका कारण चिनिन्छन् । उनी अहिले चर्चित स्टार किड्सको सूचिमा पर्छन् जसलाई घरबाहिर निस्कने बित्तिकै क्यामेरामा कैद गर्न धेरैले तँछाडमछाड गर्छन् । उनी कहाँ को सँग जान्छन् सबै कुराहरु सार्वजनिक भईरहेका हुन्छन् ।
अझ भन्ने हो भने तैमुरको बलिवुडका चर्चित स्टारको भन्दा कम क्रेज छैन । सामाजिक सञ्जालमा उनका तस्बिर र भिडियोहरु भाईरल भईरहेका हुन्छन् । तैमुरको यहि क्रेज देखेर हुनसक्छ सेफअलि खान र करिना कपूर खानले उनको बलिवुड डेब्युको तयारी गरेका छन् । २ वर्षका तैमुरले छिट्टै नै बलिवुडमा कदम राख्ने भएका छन् ।
भारतीय सञ्चार माध्ययमका अनुसार करीनाको आगामी सिनेमा गुड न्युजमा तैमुरले काम गर्ने भएका छन् । सिनेमामा १० मिनेट देखिने तैमुरले केही सिनहरुको छायाकंन पनि गरिसकेका छन् । ‘गुड न्युज’मा करीनासँगै अक्षय कुमार, कायरा आडवाणी र दिलजित दोसांझको अभिनय रहनेछ ।
केही दिन अघि मात्रै सिनेमाको सेटबाट कायरा र तैमुरको एउटा भिडियो भाईरल भएको थियो । यो भिडियो देखेर धेरैले तैमुर आमा करीनासँग सेटमा गएको अनुमान लगाएका थिए । तर तैमुर सिनेमाको छायाकंनकै लागि सेटमा पुगेका थिए ।